10 Fitsangatsanganana mpivady tena tadiavina | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Fitsangatsanganana mpivady tena tadiavina
Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
tantaram-pitiavana, mampientam-po, manaraka ny morontsirak'i Italia, any amin'ny Alpes frantsay eo ivelan'ny tokonam-baravarana, na any amin'ny toerana any Sina, ambony ireo 10 ny mpivady tadiavina dia hahagaga anao.
1. Ny dia mpivady tena tadiavina: Fiatoana an-tanàna romantika any Paris
Amin'ny aingam-panahy ho an'ny sarimihetsika romantika indrindra, Paris no toerana tantaram-pitiavana indrindra amin'ny dia ataon'ny mpivady fomba any Hollywood. Ny tanàna tantaram-pitiavana indrindra, ary iray amin'ireo be mpandeha indrindra eran'izao tontolo izao, dia mbola ary ny toerana tadiavina indrindra ho an'ny mpivady.
Raha manana fientanam-po amin'ny zavatra frantsay rehetra ianao, patisserie, Saha zaridaina frantsay, sy lalan-kely mahafinaritra, avy eo vaky tanàna any Paris dia mety aminao. Ary, fitsangatsanganana am-pitiavana any Paris no toerana tadiavina indrindra ho an'ny mpivady izay tia misavoritaka, ary miaina la vie en rose.
2. Ny fitsidihan'ny mpivady no tadiavina any Italia: Amalfi Coast
Food, mahatalanjona ny fomba fijeriny, sy ny ranomasina, Ataovy iray amin'ireo toerana tadiavina indrindra amin'ny fitsangatsanganan'ny mpivady ny morontsirak'i Amalfi. Ireo trano maro loko eny amin'ny harambato, lalana mihodina, ary ny ranomasina eo anilanao, no ilainao fotsiny ho an'ny mpivady mampirafy’ fialan-tsasatra.
Amalfi Coast dia 50 kilometatra amoron'ny arabe kely mahafinaritra, tora-pasika, ary trano fialofana miafina miaraka amin'ny fomba tsy hay hadinoina. Afaka mandeha mitsangantsangana ianao, na filentehan'ny masoandro, mahandro, na misakafo amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana amoron-dranomasina mahafinaritra. Ny safidy eto amin'ny morontsirak'i Amalfi dia tsy misy farany, na dia amin'ireo tanàna kely manamorona ny morontsirak'i Italia aza, raiso fotsiny ny safidinao!
3. Ny Nosy Skye, Scotland
Misy hantsana mahatalanjona, fomba fijery mahafinaritra, ary kolontsaina mahavariana, Scotland dia iray amin'ireo toerana mahavariana indrindra eto an-tany. Ny Nosy Isie of Skye dia iray amin'ireo faritra mahafinaritra indrindra eto Ekosy, ary mila farafaharatsiny farafaharatsiny 2 herinandro hankafizana ireo hatsarany maro.
Na te-hidera ny fomba fijery ianao, na mahita an-tongotra izany amin'ny iray amin'ireo làlana fitsangantsanganana maro, Isle of Skye dia fahagagana voajanahary. Ohatra, raha mpivady adventurous ianao, avy eo dia ho tianao ny hahita ny fananganana geolojika Quiraing. Etsy ankilany, mety hanana fotoana tantaram-pitiavana ianao ao amin'ny pisinina Fairy, na mitsidika tranobe sy zaridaina Dunvegan.
Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny Isle of Skye dia toerana mahaliana ho an'ny dia mpivady, misaotra ireo tendrombohitra Scottish mahavariana, lohasaha, ary morontsiraka mahatalanjona. Eto, afaka mandeha mifampitantana ianao, miaraka mankafy ny traikefa nahafinaritra.
4. Ny fitsangatsanganana an-tsehatra mpivady be mpitady indrindra any Suisse
Miaraka amin'ny tampon-dranomandry, ahitra maintso, ary fomba fijery kanto toa sary hosodoko, Suisse dia mpivady mahafinaritra. Ny fitsangantsanganana tadiavina indrindra any Switzerland dia ny Zermatt, Rhine Falls, sy lohasaha Lauterbrunnen. Raha tianao ny dia, dia i Zermatt no toerana fitsangantsanganana tonga lafatra ho anao, ary raha te hiala sasatra amin'ny toerana mahafinaritra ianao, avy eo ny lohasaha Lauterbrunnen dia mety.
Suisse dia manana toeran-droa fitsangatsanganana mpivady, noho izany dia tena miankina amin'ny tanjonao amin'ny fialantsasatra am-pitiavana. Na izany na tsia, hahita toerana romantika maro ianao, mandritra ny volan-tantely faharoa, na fotsiny satria te hifankatia, amin'ny fotoana manokana. Ary noho izany, it is really recommended to plan at least 7 fitsangatsanganana an-andro any Suisse.
Sakafo mahafinaritra, atmosfera mahavariana, ary toerana romantika miafina maro. Ny dia mankany Venice dia ao amin'ny lisitry ny siny mpivady. Ny isan'ny mpizahatany mandeha any Venise isan-taona dia miavaka, na izany aza, ny hatsarany sy ny hatsarany dia hanintona anao isaky ny mandeha. Raha ny tena izy, tena manintona, fa tsy ho hitanao akory ny rehetra, ary manana fotoana mahatalanjona fotsiny amin'ny fialantsasanao am-pitiavana.
Ny fitsangatsanganana any Venise dia iray amin'ireo tampony 5 mitsangatsangana ny mpivady tena tadiavina satria mety mandritra ny faran'ny herinandro fohy. Manana fahitana maro ny tanàna, Sakafo italiana, ary safidy fonenana mahafinaritra, ka hahita paradisa amin'ny gondola ianao. Na izany aza, raha te handositra ianao ary hahita ny vatosoa italiana manodidina dia Venise, afaka mandeha amin'ny iray amin'ireo maro ianao fitsangatsanganana an-andro avy any Venise.
6. Fialan-tsasatra glamping mpivady be tadiavina indrindra: Ny Alpes frantsay
Glamping dia iray amin'ireo fironana mahamay indrindra any Eropa, ampiarahina amin'ireo Alpes frantsay, ary manana ny mpifankatia indrindra ianao’ diany. Ity karazana lasy ity dia manome fahafinaretana sy mihaja kokoa noho ny fitobiana an-day. Apetraka amin'ny natiora sy mahafinaritra, miaraka amin'ny fomba fijery mahatalanjona an'ny Alpes frantsay.
Miondrika ao amin'ny bungalow anao manokana, kabine ahazoana aina, mifoha amin'ireo vorona mihira, manana kafe, ary mandeha mitsangantsangana mahitsy eo am-baravarana – tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana. Rehefa feno tanteraka ny akanim-pitiavanao, ary amin'ny toerana tena kanto, tsy mila zavatra hafa ianao amin'ny fialan-tsasatra tantaram-pitiavana tsy hay hadinoina.
7. Amsterdam: Fialantsasatra amin'ny fitsangatsanganana an-trano
Amsterdam dia iray amin'ireo tanàna mahafinaritra any Eropa ho an'ny mpivady, ary ny fijanonan'ny sambo an-trano no tantaram-pitiavana indrindra any Amsterdam. Ny lakana an-trano dia iray amin'ireo sary masina ao Amsterdam, mijanona eny akaikin'ny lakandrano. Na izany aza, raha vao miditra an-tsehatra ianao, ho hitanao fa milay be, akaiky, ary arovana amin'ny vahoaka mankafy ny lakandrano.
Tsy misy fisalasalana, Vibe an'ny Amsterdam, rivotra iainana, kolontsaina, sy ny hatsaran-tarehy manaitra ny mpivady avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. koa, fahitana tanàna sy renirano, kafe any ivelan'ny varavarankelinao, ny fialan-tsasatrao dia ho nofinofy.
Tsena lehibe ahazoana sakafo, mahafatifaty Notting Hill, Kensington Gardens, fitsangatsanganana ataon'olon-droa dia tsy hay hadinoina. Manolotra hetsika maro dia maro ny tanàna, ka mety hieritreritra ianao fa be loatra izany amin'ny fialantsasatra am-pitiavana.
Ary noho izany, mendrika ny hanaovana fikarohana kely, avy amin'ny toerana tsara indrindra, sy ny zavatra tena tianao hatao. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, manambatra ny lisitry ny tsena sy ny manintona tianao hotsidihina. Ankoatry ny, avelao ny fotoana be ho an'ny cocktails amin'ny maro bara tafo. Ny votoatin'ny dia rehetra dia ny hamerenana ny tantaram-pitiavana ary hiara-hipoaka.
9. Fitsangatsanganana mpivady be mpitady indrindra any Italia: Fitsangatsanganana divay any Tuscany
tanim-boaloboka, havoana maitso silky, ary Sakafo italiana, dia mankany amin'ny Italiana renivohitra divay dia ao amin'ny lisitry ny siny mpivady tsirairay. Mandeha amin'ny tanimboaloboka, mitsoka avy amin'ny divay mena anao, ary manaram-po amin'ny tontolo milamina, azo antoka fa hanaiky ianao fa toa masina i Tuscany.
Tokoa, Tuscany dia iray amin'ireo tanjon'ny mpivady ambony indrindra isan-taona. Ny fomba fijery majika sy ny divay dia mahasarika ny mpivady avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, mamerina azy ireo isan-taona.
10. Fitsangatsanganana mpivady be mpitady indrindra any Sina: Reniranon'i Yulong
Toerana mahaliana i Shina, ary ny Ony Yulong dia iray amin'ireo toerana manintona sy mahavariana indrindra. Yulong River dia ao amin'ny Reniranon'i Li, lava sy tsy misy farany, voahodidin'ny voly maitso, tanàna, sy tanimbary. Noho izany, ny fanaovana traikefa nahafinaritra manamorona ny Ony Yulong dia traikefa mahagaga.
Ho fanampin'ny voajanahary tsara tarehy, ny Reniranon'i Yulong fonenan'ny vohitra sy foko maro. Noho izany, hanana fotoana tsy fahita firy ianao hianatra momba ny fomba fiainana any amin'ny faritry Yangshuo, kolontsaina, sy ny zavakanto, toy ny efa an-jato taona maro lasa izay.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny drafitra ny iray amin'ireto 10 ny mpivady maniry indrindra dia mandeha lamasinina.
Te-hapetraka ao amin'ny tranonkalanao ve ny lahatsoratry ny bilaoginay hoe "Fitsidihana mpivady 10 tadiavina indrindra"? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fmost-wanted-couples-trips%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#olon-tiany mpivady CouplesTrips RomanticCities RomanticEurope RomanticTrips RomanticViews
Hamonjeko ny sasany Euros Ary raiso Lamasinina Ary Travel Europe